सारा: परमेश्वरले तिनलाई “राजकुमारी” भन्नुभयो
प्रहरीधरहरा | सङ्ख्या ५ २०१७
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कम्बोडियन काजाक काबीय काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (युनानिज) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चीन (हाका) चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तोक पिसिन तोजोलबल त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोनापियन पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मबुन्डा मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
तिनीहरूको विश्वास अनुकरण गर्नुहोस् | सारा
सारा एकछिन आफ्नो कामबाट आराम लिन्छिन्‌ र जीउ तन्काउँदै आकाशतिर हेर्छिन्‌। तिनका सेवकहरू पनि तिनको रेखदेखमा रमाइलो मान्दै काम गरिरहेका छन्‌। तिनी आफ्नो काम पूरा गर्न निकै मेहनत गर्छिन्‌। साराले हातको धुलो टकटकाउँदै आफ्नो हात-खुट्टा तन्काएको कल्पना गर्नुहोस्। हुन पनि तिनी दिनभरि आफ्नो परिवार बसिरहेको पाल मर्मत गर्न र च्यातिएको भाग सिलाउन व्यस्त छिन्‌। वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको पाल घाम र पानीले गर्दा मक्किसकेको छ। ती पाललाई हेरेर आफ्नो परिवारले घुमन्ते जीवन बिताएको पनि कत्ति लामो समय बितिसकेछ भनेर तिनी सम्झिन्छिन्‌। दिन ढल्किसक्यो र पर क्षितिजमा देखिने घाम पनि अस्ताउने तरखर गर्दै छ। बिहान सबेरै बाहिर निस्किएका आफ्नो पति अब्राहाम * कहिले घर फर्केलान्‌ भनेर सारा प्रतीक्षा गर्दै छिन्‌। परबाट आफ्नो श्रीमान्‌ आइरहेको देखेपछि तिनी मुसुक्क मस्कुराउँछिन्‌।
अब्राहामले आफ्नो ठूलो परिवारलाई यूफ्रेटिस नदीपारि कनानतर्फ डोऱ्याएको पनि दस वर्ष बितिसक्यो। प्रतिज्ञा गरिएको सन्तानबाट एउटा राष्ट्र बनाउने यहोवाको उद्देश्य पूरा गर्न आफ्नो पतिले विशेष भूमिका खेल्ने थिए भनेर सारालाई थाह थियो। त्यसैले तिनी गन्तव्य नभएको यो लामो यात्रामा आफ्नो पतिलाई साथ दिन यथासक्दो गर्दै थिइन्‌। यहोवाको उद्देश्य पूरा गर्न साराले आफ्नो तर्फबाट कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थिन्‌? तिनी बाँझी थिइन्‌ अनि पचहत्तर वर्ष पुगिसकेकी थिइन्‌। त्यसैले तिनको मनमा यस्तो प्रश्न उठेको हुन सक्छ, ‘म बाँझी रहुन्जेल परमेश्वरको प्रतिज्ञा कसरी पूरा हुन सक्छ र?’ साराको मनमा यस्तो भावना आउनुको कारण हामी बुझ्न सक्छौं।
हाम्रो मनमा पनि कहिलेकाहीं यस्तो प्रश्न आउन सक्छ, ‘परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू कहिले पूरा होलान्‌?’ साँच्चै, पर्खन कसलाई पो सजिलो लाग्छ र? अझ विशेषगरि आफूले प्रतीक्षा गरिरहेको आशा पूरा भएको हेर्न हामी आतुर हुन्छौं। त्यसोभए हामी वफादार स्त्री साराको विश्वासबाट के सिक्न सक्छौं?
“परमप्रभुले मेरो कोख बन्द गरिदिनुभएको छ”
साराको परिवार भर्खरै मिश्रबाट फर्किएको थियो। (उत्पत्ति १३:१-४) तिनीहरू बेतेलको (कनानीहरूले यस ठाउँलाई लूज भन्थे) पूर्वतिर उच्च पहाडी भेगमा पाल टाँगेर बस्दै थिए। त्यस ठाउँबाट साराले प्रतिज्ञा गरिएको देश स्पष्टसँग देख्न सक्थिन्‌। त्यहाँ कनानीहरूको बस्ती अनि ठूलठूला बाटोहरू देखिन्थे। तर त्यस ठाउँबाट देखिने दृश्य साराको आफ्नो सहरको तुलनामा एक छेउ पनि थिएन। तिनी मेसोपोटामियाली सहर ऊरमा हुर्किएकी थिइन्‌ जुन अहिले बसिरहेको ठाउँबाट १,९०० किलोमिटर टाढा थियो। साराले आफ्ना सबै नातेदार, आफ्नो आरामदायी घर अनि ऊर सहरका सुख-सुविधाहरू त्यागेर आएकी थिइन्‌। ऊरमा ठूलठूला बजारहरू थिए र भौतिक कुराहरूले पनि त्यो सहर सम्पन्न थियो, सायद घरघरमा पानीका धाराहरू पनि थिए होलान्‌! तर सारा दुःखी हुँदै आफू जन्मे हुर्केको सहर अनि त्यहाँको सुख-सुविधाहरूको चाह गरिरहेको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं।
करिब २,००० वर्षपछि प्रेषित पावलले लेखेको कुरा याद गर्नुहोस्। सारा र अब्राहामको विश्वासबारे तिनले यस्तो लेखे, “यदि तिनीहरूले आफूले छोडेर आएको ठाउँलाई सम्झिरहेका भए तिनीहरूसित फेरि त्यहीं फर्कने मौका हुनेथियो।” (हिब्रू ११: ८, ११, १५) तर सारा र अब्राहामको मनमा आफूले छोडेर आएका कुराहरू फेरि पाउने इच्छा कहिल्यै आएन। यदि तिनीहरू आफ्नो चाहना पूरा गर्न तर्फ लागेका भए तिनीहरू आफ्नो घर फर्कन सक्थे। यसो गर्दा तिनीहरूले यहोवाबाट पाउने विशेष जिम्मेवारी र आशिष्‌ गुमाउने थिए। इतिहासको पानासँगै तिनीहरूको सम्झना पनि बिलाएर जाने थियो। लाखौं मानिसका निम्ति तिनीहरू विश्वासको उदाहरण बन्ने थिएनन्‌ होला।
पहिलेका कुराहरूमा ध्यान लगाउनुको सट्टा साराले भविष्यमा हुने कुरामा नजर लगाइन्‌। त्यसैले यात्राको दौडान साराले सधैं आफ्नो पति अब्राहामलाई साथ दिइरहिन्‌। तिनले चाहिने बेलामा पाल टाँग्न, पट्टयाउन अनि गाईवस्तुको बथान डोऱ्याउन मदत गर्थिन्‌। जस्तोसुकै चुनौती र परिवर्तनको सामना गर्नुपरे तापनि साराले कहिल्यै हार मानिनन्‌। यहोवाले फेरि अब्राहामसित करारको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ। तर साराको भने कुरै निस्कँदैन!—उत्पत्ति १३:१४-१७; १५:५-७.
अब चाहिं सारा आफ्नो मनमा दबेका कुराहरू अब्राहामलाई नबताई बस्नै सक्दिनन्‌। अब्राहामलाई आफ्नो मनको कुरा बताउँदा तिनको अनुहारमा कस्तो भाव देखिन्थ्यो, एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। तिनी भन्छिन्‌: “हेर्नुहोस्, परमप्रभुले मेरो कोख बन्द गरिदिनुभएको छ।” त्यसपछि तिनले अब्राहामलाई आफ्नो दासी हागारबाट सन्तान जन्माउन आग्रह गर्छिन्‌। यस्तो आग्रह गर्दा सारालाई कत्ति गाह्रो भयो होला, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हामीलाई यो कुरा सुन्दा अनौठो लाग्छ होला तर अब्राहामको समयमा सन्तान जन्माउन बहुविवाह गर्नु अथवा उप-पत्नी राख्नु खासै नौलो कुरा थिएन। * सायद साराले यसो गर्दा अब्राहामको सन्तानद्वारा एउटा राष्ट्र खडा गर्ने परमेश्वरको उद्देश्य पूरा हुनेछ भनेर सोचेकी थिइन्‌ कि? कुरा जेसुकै होस्, सारा हरहालतमा जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार थिइन्‌। त्यसोभए अब्राहामले चाहिं के गरे? बाइबल भन्छ: ‘अब्राहामले साराको कुरा माने।’—उत्पत्ति १६:१-३.
के यहोवा आफैले सारालाई त्यसो गर्न लगाउनुभएको थियो? अहँ, थिएन। साराका शब्दहरूमा मानव सोचाइ झल्किन्छ। आफू बाँझी हुनुको पछाडि यहोवाको हात छ भनेर तिनले सोचेकी थिइन्‌। त्यसैले यहोवा आफैले केही गर्नुहोला भनेर तिनले आशा गरेकी थिइनन्‌। साराको यस्तो निर्णयले तिनको जीवन झनै कष्टकर हुने थियो। तर तिनका शब्दहरूबाट तिनी रत्तीभर स्वार्थी थिइनन्‌ भन्ने कुरा स्पष्टै देखिन्छ। आज संसारमा थुप्रैलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउन पाए पुग्छ। तर साराको यस्तो निःस्वार्थ मनोभाव हाम्रो लागि उत्कृष्ट उदाहरण हो। हामीले पनि आफ्नो स्वार्थी इच्छाको पछि नलागी यहोवाको उद्देश्यलाई प्रथम स्थान दिन्छौं भने हामीले साराको विश्वास अनुकरण गरिरहेका हुन्छौं।
“तँ हाँसेकै होस्”
आफू अब्राहामद्वारा गर्भवती भएको थाह पाएपछि हागारले आफूलाई साराभन्दा उच्च सम्झन थालिन्‌ र आफ्नो मालिक्नी सारालाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागिन्‌। बिचरी बाँझी साराको चित्त कति दुख्यो होला! साराले हागारलाई तह लगाउन कठोर व्यवहार गर्न थालिन्‌। अब्राहामले अनि यहोवाले पनि त्यसो गर्न देखि सारालाई रोक्नुभएन। पछि हागारले इश्माएललाई जन्म दिइन्‌ र समय बित्दै गयो। (उत्पत्ति १६:४-९, १६) बाइबल विवरण हेर्ने हो भने यहोवा परमेश्वर अब्राहामसँग अर्को पटक बोल्नुहुँदा सारा उनानब्बे र अब्राहाम उनान्सय वर्ष पुगिसकेका थिए। अनि यसपटक तिनीहरूलाई यहोवाले विशेष सन्देश दिनुभयो।
यहोवाले फेरि अब्राहामसँग तिनको सन्तान वृद्धि गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यहोवाले तिनको नाम पनि परिवर्तन गरिदिनुभयो। त्यसबेलासम्म तिनी अब्राम भनेर चिनिन्थे। तर यहोवाले तिनलाई अब्राहाम भन्ने नाम राखिदिनुभयो, जसको अर्थ “असङ्‌ख्य मानिसहरूको बुबा” हो। यहोवाले बल्ल साराको भूमिका पनि के हुनेछ भनेर बताउनुभयो। उहाँले तिनको नाम साराई, जसको अर्थ “झगडालु” हुन सक्छ, परिवर्तन गरेर सारा राखिदिनुभयो। साराको अर्थ चाहिं? “राजकुमारी!” यहोवाले ती प्यारी स्त्रीलाई त्यो नाम दिनुको कारणबारे यसरी बताउनुभयो: “म त्यसलाई आशिष्‌ दिनेछु, र त्यसबाहेक त्यसबाट म तँलाई एउटा छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष्‌ दिनेछु र धेरै जातिहरूका आमा त्यो हुनेछ। जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछन्‌।”—उत्पत्ति १७:५, १५, १६.
यहोवाले प्रतिज्ञा गर्नुभएको सन्तानद्वारा नै सम्पूर्ण जातिले आशिष्‌ पाउने थिए। त्यो सन्तान साराले जन्माउने छोरामार्फत आउने थियो। परमेश्वरले साराको छोराको लागि रोज्नुभएको नाम इसहाकको अर्थ “हाँसो” हो। यहोवाको उद्देश्यअनुसार साराले छोरा जन्माउने छिन्‌ भन्ने कुरा थाह पाएपछि अब्राहाम ‘घोप्टो परी मनमनै हाँसे।’ (उत्पत्ति १७:१७) तिनलाई अचम्म लाग्यो, तिनको खुसीको सीमै थिएन। (रोमी ४:१९, २०) अनि साराबारे चाहिं के भन्न सकिन्छ?
अब्राहामको पालमा तीन जना अपरिचित मानिस आए। मध्य दिनको चर्को घाममा पनि ती वृद्ध दम्पती पाहुनाहरूको सत्कार गर्न अग्रसर हुन्छन्‌। अब्राहामले सारालाई भन्छन्‌: “तुरुन्तै पाँच पाथी मसिनो पीठो तयार गरी मुछेर रोटी बनाऊ।” त्यतिबेला अतिथि-सत्कार गर्नु सजिलो कुरा थिएन, निकै तयारी गर्नुपर्थ्यो। तर अब्राहामले सबै काम आफ्नो पत्नीलाई मात्र अह्राएनन्‌। तिनी आफू चाहिं अरू थप खानेकुरा र पिउने कुरा तयार पार्न लागे। (उत्पत्ति १८:१-८) ती “मानिसहरू” त स्वर्गदूत पो रहेछन्‌! प्रेषित पावलले सायद त्यही घटनाबारे बताउँदै यस्तो लेखे, “अतिथि-सत्कार गर्न नबिर्स किनकि कसै-कसैले यसरी थाहै नपाई स्वर्गदूतहरूको सत्कार गरे।” (हिब्रू १३:२) के हामी अतिथि-सत्कार गर्ने सन्दर्भमा अब्राहाम र साराले बसालेको राम्रो उदाहरण अनुकरण गर्छौं?
सारालाई अतिथि-सत्कार गर्न मन पर्थ्यो
एक जना स्वर्गदूतले साराले छोरा जन्माउने छिन्‌ भनेर अब्राहामलाई फेरि बताए। यो कुरा साराले पालभित्र बसेर सुनिरहेकी थिइन्‌। त्यस्तो वृद्ध उमेरमा पनि बच्चा जन्माउने कुरा सुन्दा तिनले पत्याउनै सकिनन्‌ र हाँस्दै आफैलाई भनिन्‌: “म वृद्धा भइसकेको छु, र मेरा पति पनि वृद्ध भइसक्नुभएको छ, र के मलाई यो सुख हुन्छ र?” त्यसपछि सारालाई सच्याउँदै स्वर्गदूतले यस्तो प्रश्न गरे, “परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरो औधी कठिन छ र?” तिनले डराउँदै हत्त न पत्त यस्तो जवाफ दिइन्‌: “म हाँस्तै हाँसिनँ!” साराको त्यस्तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक थियो। तर स्वर्गदूतले तिनी हाँसेकै थिइन्‌ भनेर बताए।—उत्पत्ति १८:९-१५.
सारा त्यसरी हाँसिन्‌ भन्दैमा तिनमा विश्वासको कमी थियो भन्न मिल्छ? त्यसो त पक्कै मिल्दैन! बाइबल भन्छ: “विश्वासैले गर्दा साराले गर्भधारण गर्ने शक्ति पाइन्‌ जबकि गर्भधारण गर्ने तिनको उमेर नाघिसकेको थियो, किनकि प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई तिनी विश्वासयोग्य ठान्थिन्‌।” (हिब्रू ११:११) यहोवा जस्तोसुकै प्रतिज्ञा पनि पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा सारा विश्वस्त थिइन्‌। हामीमा पनि त्यस्तै विश्वास हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले बाइबलमा बताइएको परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्नु आवश्यक छ। यसो गर्दा सारामा त्यस्तो विश्वास हुनुको कारण के थियो, हामी राम्ररी बुझ्न सक्नेछौं। साँच्चै, यहोवा वफादार हुनुहुन्छ र आफ्नो सबै प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीं यहोवाले आफ्नो प्रतिज्ञा हामीले सोच्दै नसोचेको तरिकामा पूरा गर्नुहुँदा हामी आश्चर्यचकित हुन्छौं, सायद हाँस्छौं पनि होला!
“जसो भन्छे सोही बमोजिम गर्‌”
साराको विश्वासले गर्दा यहोवाले तिनलाई आशिष्‌ दिनुभयो
नब्बे वर्षको उमेरमा बल्ल साराले जीवनभर चाहेको कुरा पूरा भयो। सय वर्ष पुगिसकेका आफ्नो मायालु पतिको निम्ति तिनले एउटा छोरो जन्माइन्‌। परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभएजस्तै तिनले आफ्नो छोराको नाम इसहाक अर्थात्‌ “हाँसो” राखे। साराको चाउरी परेको अनुहारमा खुसीको लहर छाएको हामी कल्पना गर्न सक्छौं। तिनले मुस्कुराउँदै यसो भनिन्‌: “परमेश्वरले मलाई एउटा हाँस्ने कारण दिनुभयो। यो सुन्ने जत्ति सबै मसँगै हाँस्नेछन्‌।” (उत्पत्ति २१:६) परमेश्वरले दिनुभएको यस्तो आशिष्‌ पाएर तिनी जीवनभरि आनन्दित हुन सकिन्‌। तर आशिष्‌सँगै तिनको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी पनि थियो।
पाँच वर्ष पुगेपछि इसहाकलाई आमाको दूध छुटाउने समय भयो। दूध छुटाइएको दिन साराको परिवारले ठूलो भोज दियो। तर सबै कुरा ठिकसँग चलिरहेको थिएन। बाइबल विवरण हेर्ने हो भने साराले इसहाकसँग अन्यायपूर्ण व्यवहार भइरहेको “देखिन्‌।” हागारकी उन्नाइस वर्षीय छोरा इश्माएलले कलिला इसहाकको खिसी गरिरहेको थियो। यो साधारण खिसी मात्र थिएन। हजारौं वर्षपछि परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएर प्रेषित पावलले इश्माएलको त्यो व्यवहारलाई खेदो भनेर बताए। साराले इश्माएलको यस्तो व्यवहारको कारण इसहाकको जीवन नै खतरामा पर्न सक्ने कुरा याद गरिन्‌। इसहाक केवल आफ्नो छोरा मात्र होइन तर उनले परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने थिए भनेर सारालाई थाह थियो। त्यसैले सारा आफ्नो हिम्मत जुटाउँछिन्‌ अनि हागार र इश्माएललाई घरबाट निकालिदिन अब्राहामलाई सिधै भन्छिन्‌।—उत्पत्ति २१:८-१०; गलाती ४:२२, २३, २९.
अब्राहामले कस्तो प्रतिक्रिया देखाए? बाइबल भन्छ: “आफ्नै छोरा भएकोले यो कुरा अब्राहामलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो।” अब्राहाम इश्माएललाई माया गर्थे। आफ्नो छोराप्रतिको स्नेहले गर्दा साराले भने जस्तो गर्न तिनको मनले मानेन। यसकारण यहोवाले समस्याको गहिराइ बुझेर यस मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुभयो। बाइबल भन्छ: “परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो, ‘त्यो बालक र तेरी कमारीको निम्ति तैंले चिन्ता नगरी साराले तँलाई जसो भन्छे सोही बमोजिम गर्‌, किनकि इसहाकबाटनै तेरो वंशको नाउँ रहनेछ।’” हागार र इश्माएलको हेरविचार गर्नेछु भनेर परमेश्वरले अब्राहामलाई विश्वस्त पार्नुभयो। वफादार अब्राहाम यहोवाप्रति आज्ञाकारी भए।—उत्पत्ति २१:११-१४.
सारा अब्राहामको वफादार र साँचो जीवनसाथी थिइन्‌। तिनले अब्राहामलाई जे सुन्न मन पर्थ्यो ती कुराहरू मात्र बताइनन्‌। आफ्नो परिवार र भविष्यलाई असर गर्न सक्ने समस्याहरू आउँदा तिनले इमानदार भई अब्राहामसँग खुलस्त कुराकानी गरिन्‌। तिनले गरेको यस्तो खुलस्त कुराकानीलाई अनादरपूर्ण भन्न मिल्दैन। प्रेषित पत्रुस जो आफै एक विवाहित पुरुष थिए, तिनले सारालाई पतिको गहिरो आदर गर्ने उदाहरणीय स्त्री भनी बताए। (१ कोरिन्थी ९:५; १ पत्रुस ३:५, ६) वास्तवमै भन्नुपर्दा, यदि साराले त्यस विषयमा कुरा नगरेकी भए तिनी अब्राहामको आदर गर्नदेखि चुक्थिन्‌। तिनको परिवारले डरलाग्दो नतिजा भोग्नुपर्ने हुन सक्थ्यो, यहोवाले सुम्पनुभएको जिम्मेवारी तिनीहरूले गुमाउन पनि सक्थे। त्यसैले साराले जे गर्नु आवश्यक थियो त्यही गरिन्‌।
थुप्रै पत्नीले साराको असल उदाहरण अनुकरण गर्ने प्रयास गर्छन्‌। तिनीहरूले आफ्नो पतिसँग इमानदार अनि आदरपूर्वक कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर साराबाट सिक्न सक्छन्‌। केहीले साराको मामिलामा जस्तै यहोवाले आफ्नो परिवारलाई पनि सिधै मदत दिनुभएको चाहन्छन्‌। जेहोस्, साराले देखाएको विश्वास, प्रेम र धैर्यताको असाधारण उदाहरणबाट तिनीहरूले निकै राम्रो पाठ सिक्न सक्छन्‌।
यहोवा आफैले साराको नाम “राजकुमारी” राखिदिनुभएको थियो तर तिनले कहिल्यै मानसम्मान वा विशेष ओहदाको चाह गरिनन्‌
यहोवा आफैले साराको नाम “राजकुमारी” राखिदिनुभएको थियो। तर तिनले कहिल्यै मानसम्मान वा विशेष ओहदाको चाह गरिनन्‌। त्यसैले १२७ वर्षको उमेरमा साराको मृत्यु हुँदा ‘अब्राहामले साराको निम्ति शोक र विलाप गर्नु’ कुनै छक्क लाग्दो कुरा थिएन। * (उत्पत्ति २३:१, २) अब्राहामले आफ्नी प्यारी “राजकुमारी”-लाई सधैं सम्झिरहे। यहोवा परमेश्वरको सम्झनामा पनि यी वफादार स्त्री सधैं रहिरहनेछिन्‌ र पूरै पृथ्वी प्रमोदवन भएपछि उहाँले तिनलाई पुनर्जीवित गर्नुहुनेछ। सारा र तिनको विश्वासको अनुकरण गर्नेहरू सबैले भविष्यमा अनन्त जीवनका साथै अरू थुप्रै आशिष्‌ पाउनेछन्‌।—यूहन्ना ५:२८, २९.
^ अनु.3परमेश्वरले यी दम्पतीलाई नयाँ नाम दिनुअघि तिनीहरू अब्राम र साराई भन्ने नामले चिनिन्थे। तर धेरैजसोले उनीहरूलाई अब्राहाम र सारा भन्ने नामले चिन्ने भएकोले यस लेखमा पनि हामी यही नाम प्रयोग गर्नेछौं।
^ अनु. 10 यहोवाले पुरातन समयमा बहुविवाह गर्न र उप-पत्नीहरू राख्नदेखि रोक्नुभएको थिएन। पछि यहोवाले येशूलाई विवाहबारे अदनको बगैंचामा तोकेको स्तर अर्थात्‌ एकै जनासित मात्र विवाह गर्नुपर्ने स्तर फेरि स्थापित गर्न लगाउनुभयो।—उत्पत्ति २:२४; मत्ती १९:३-९.
^ अनु. 25 सारा एक मात्र स्त्री हुन्‌ जसको मृत्यु हुँदाको उमेर बाइबलमा रेकर्ड गरिएको छ।
अब्राहाम—‘विश्‍वासले गर्दा असल ठहरिएका सबैका बुबा’
अब्राहामले कसरी विश्‍वास देखाए? तपाईं अब्राहामको विश्‍वास कसरी अनुकरण गर्न चाहनुहुन्छ?
परमेश्वर अब्राहामसित करार बाँध्नुहुन्छ
अब्राहाम किन कनानमा सरे? यहोवाले अब्राहामसित कस्तो करार बाँध्नुभयो?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने परमेश्वरले तिनलाई “राजकुमारी” भन्नुभयो
आवरण लेख स्वर्गदूतहरू—के तिनीहरूले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छन्‌?
आवरण लेख स्वर्गदूतहरूबारे सत्य कुरा
आवरण लेख के प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन स्वर्गदूत खटाइएको छ?
आवरण लेख के दुष्ट स्वर्गदूतहरू पनि छन्‌?
आवरण लेख स्वर्गदूतहरूले हामीलाई कसरी मदत गर्न सक्छन्‌
बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ मलाई परमेश्वर छैन जस्तो लाग्थ्यो
तिनीहरूको विश्वास अनुकरण गर्नुहोस् परमेश्वरले तिनलाई “राजकुमारी” भन्नुभयो
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा स्वर्गदूतहरू​—⁠तिनीहरू साँच्चै छन्‌? हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छन्‌?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा स्वर्गदूतहरू​—⁠तिनीहरू साँच्चै छन्‌? हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छन्‌?
स्वर्गदूतहरू​—⁠तिनीहरू साँच्चै छन्‌? हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छन्‌?
प्रहरीधरहरा स्वर्गदूतहरू​—⁠तिनीहरू साँच्चै छन्‌? हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छन्‌?